Izindaba - Idivayisi yokuzivocavoca okuphefumulayo
Idivayisi yokuqeqesha ukuphefumula iyisisetshenziswa sokuvuselela sokuthuthukisa umthamo wamaphaphu nokukhuthaza ukuvuselelwa kokuphefumula nokujikeleza kwegazi.
Isakhiwo silula kakhulu, futhi indlela yokusetshenziswa nayo ilula kakhulu.Masifunde ukusebenzisa idivayisi yokuqeqesha ukuphefumula ndawonye.
Idivayisi yokuqeqesha ukuphefumula ngokuvamile yakhiwa ipayipi negobolondo lezinsimbi.I-hose ingafakwa nganoma yisiphi isikhathi lapho isetshenziswa.Ukulungiselela ukuqeqeshwa, thatha i-hose bese uyixhuma kusixhumi esingaphandle kwethuluzi, bese uxhuma enye ingxenye yepayipi emlonyeni.
Ngemva kokuxhumeka, sizobona ukuthi kukhona inkomba yomcibisholo egobolondweni ledivayisi, futhi idivayisi ingabekwa ngokuqondile futhi ngokuzinzile, engabekwa etafuleni noma ibanjwe ngesandla, futhi ukulunywa ngakolunye umkhawulo wepayipi kungaba. ebanjwe ngomlomo.
Uma uphefumula ngokujwayelekile, ekuphelelweni isikhathi okujulile kokulunywa, sizobona ukuthi ukuntanta ensimbini kuyakhuphuka kancane, futhi kuncika egesini ekhishwa umoya ngangokunokwenzeka ukugcina ukuntanta kukhuphuka.
Ngemva kokukhipha umoya, dedela umlomo olumayo, bese uqala ukuhogela.Ngemva kokugcina ibhalansi yokuphefumula, qala futhi ngokulandela izinyathelo engxenyeni yesithathu, bese uphinda ukuqeqeshwa ngokuqhubekayo.Isikhathi sokuqeqesha singakhuphuka kancane kancane sisuka kwesifushane siye kude.
Ngokusebenza, kufanele sinake igxathu negxathu futhi siqhube kancane kancane ngokwamandla ethu.Ngaphambi kokuba siyisebenzise, ​​kufanele silandele imiyalelo yochwepheshe.
Ukuzivocavoca isikhathi eside kuphela lapho singabona umphumela.Ngokuzijwayeza njalo, singathuthukisa ukusebenza kwamaphaphu futhi siqinise ukusebenza kwemisipha yokuphefumula.
Isikhathi sokuthumela: Jun-22-2021